Kheladi - 'नेपाली फुटबलनिम्ति अझै परिवर्तन आवश्यक छ'
'नेपाली फुटबलनिम्ति अझै परिवर्तन आवश्यक छ'
जेठ २८, २०७९ ००:१०
नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अहिले चुनावी संघारमा छ । असार ६ गतेका लागि तय गरिएको चुनावले आगामी चार वर्षका लागि एन्फाको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष र १३ खुला तथा दुई महिला गरी १५ सदस्यका लागि ८५ मतदाता चयन भइसकेका छन् । चयन भएकामध्ये चार मतदातालाई निर्वाचन समितिले अयोग्य ठहर गरेको छ । त्यसविरुद्ध उनीहरू अपिल कमिटी पुगेका छन् ।
चार वर्षका लागि नेतृत्व लिने उद्देश्यका साथ अहिले चुनावी मैदानमा वर्तमान अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङसहित तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ । शेर्पा र नेम्वाङ दुवै प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् भने अध्यक्ष पदमा राजीव पौडेलले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।
निर्वाचनको तयारीमा अत्यन्तै व्यस्त अध्यक्ष पदका दुई उम्मेदवारसँग खेलाडी डटकमले छोटो कुराकानी गरेको छ । यसैक्रममा हामीले अध्यक्षमा प्रत्याशी वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङसँग ‘अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?’ भनेर सोधेका थियौं ।
प्रस्तुत छ, खेलाडी डटकमका अजय फुयालले नेम्वाङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
चुनावको तयारी कस्तो छ ? जित्नुहुन्छ ?
चुनावको तयारी एकदमै राम्रो छ । हामी जित्छौं । क्लबहरू र जिल्लाहरूको समर्थन छ हामीलाई । उम्मेदवारी घोषणा सभामा जति जिल्ला र क्लबहरूको उपस्थिति रह्यो, त्यो हाम्रो जितको आधार हो । त्यसमा अझै मतहरू थपिने क्रम छ । यसले गर्दा हाम्रो जित्ने आधारहरू दिनप्रतिदिन बलियो हुँदै गइरहेको छ ।
पहिला ‘चेन्ज एन्फा’ भन्नुभयो । अहिले ‘चेन्ज कर्मा’ भन्न थाल्नुभएको छ नि ?
चेन्ज कर्मा होइन । चेन्ज एन्फा भनेको त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने थियो । हिजो हामीले किन चेन्ज एन्फा अभियान, एन्फा शुद्धीकरण अभियान चलायौं भन्दाखेरी हाम्रा कुरा सुनुवाइ भएन, माइन्युटमा अध्यक्ष र महासचिवले मात्र हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ । हामीसँग कुनै सल्लाह भएन, पारदर्शिता भएन, सामूहिक नेतृत्व भएन जस्ता कुराहरू लिएर हामीले चेन्ज एन्फा अभियान चलाएका हौं नि त । तर हामी आइसकेपछि पनि तपाईंहरूले देखिराख्न्ुभएको छ, बजेट केन्द्रीकृत हुन्छ, अधिकार केन्द्रीकृत हुन्छ् । अपारदर्शी ढंगले एन्फा चलिरहेको छ । त्यही भएर पनि अहिले हामीले हिजो गरेको परिवर्तन पुगेन, अपुरो भयो । अझै परिवर्तन नेपाली फुटबल निम्ति आवश्यक छ भन्ने लागेर हामीले हाम्रो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
एन्फामा पंकजविक्रम नेम्वाङको काम नै विरोध गर्ने जस्तो देखियो नि । पहिला गणेश थापाको, अहिले कर्माछिरिङ शेर्पाको ?
होइन, मैले व्यक्तिको विरोध गरेको होइन । मैले कहिले विरोध गरें त व्यक्तिको ? संस्थामा बसिसकेपछि त संस्थाको निर्णयहरू हुने विधिसम्मत, विधानसम्मत, नियमावलीसम्मत हुनुपर्ने भनेर नै आवाज उठाएको हो । कि चाहिँ मैले उठाएको आवाज संस्था विपरीत छ, विधान विपरीत छ, नियमावली विपरीत छ भन्नुपर्यो । होइन भने संस्थाका निम्ति सही आवाज उठाउँदा विरोध हुन्छ भने त्यसलाई म विरोधको रूपमा लिन्न । सही सुझावको रूपमा लिन्छु ।
अब हामीले कतिवटा निर्णय गर्यौं ? एउटा बैठक हुँदा मलाई सम्झना छ, २० वटा एजेन्डा थियो । तर विविधसमेत गरेर हामीले ५४ वटा निर्णय गरेका थियौं । त्यसमा मैले ८/९ वटा निर्णयमा आफ्नो असहमति दर्ज गरेको छु । भनेपछि त्यो बाँकीमा त मेरो पनि सहमति छ नि । मैले असहमति दर्ज गरेको कुराहरू त संस्थाकै पक्षमा थियो नि त ।
विधानविपरीत किर्ते गरेर अहिलेको अध्यक्षले झुक्याएर अधिकार लिइरहनुभएको छ । तर, त्यो चाहिँ विधान विपरीत हो । हामी कसैलाई थाहा नदिई कार्य सञ्चालन कार्यविधि भनेर बनाउनुभएको रहेछ । त्यसमा बैठक नबसेको अवस्थामा कार्यसमितिको अधिकार अध्यक्षले प्रयोग गर्ने भनेर लेखेको रहेछ । त्यो त किर्ते हो । त्यसरी म लिदिनँ ।
चार वर्षअघि कर्माछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वमा तपाईंहरूको टिम थुप्रै स्वार्थ समूह मिलेर बनेको थियो । त्यही भएर त्यो लामो समय टिकेन । अहिले तपाईंको पनि त्यस्तै छ । चुनाव जित्नुभयो भने पूरा कार्यकाल यो टिमलाई टिकाइराख्न सक्नुहुन्छ ?
सुन्नुस्, कस्तो छ भने अब फुटबलमा सरोकारवालाहरू कम्ती हुनुहुन्छ । त्यसमाथि मत लिएर आउने झनै कम्ती हुनुहुन्छ । त्यहींभित्रबाट हामीले मिलाएर उम्मेदवारी दिने हो, चुनावमा जाने हो, चुनाव जित्ने हो । त्यसमा चाहिँ म चाहिँ के विश्वस्त छु भने मैले चुनाव जितेर आएँ भने म मेरो टिमलाई चार वर्षसम्म एकजुट भएर अगाडि लैजान सक्छु । त्यो मलाई विश्वास किनभने म कहिल्यै पनि एकल निर्णय गर्दिनँ । सबै कार्यसमितिको अधिकार किर्ते गरेर म लिन्नँ ।
तपाईंहरूलाई थाहै नभई एन्फामा यस्तो कसरी सम्भव भयो त ?
उहाँले नै साधारण सभामा ‘मैले निर्णय घुसाएकै हो’ भनेर भन्नुभएको त तपाईंहरूलाई पनि थाहा छ नि । निर्णयहरू चेन्ज हुन्छ । पटक-पटक निर्णय चेन्ज भएको छ । पटक-पटक निर्णय घुसाइएको छ । हिजो हामीले अध्यक्ष र महासचिवले मात्र हस्ताक्षर गरे, हामीले पनि पाउनुपर्छ भनेर विभिन्न निकायमा उजुरी हाल्ने कर्माछिरिङ शेर्पा, पंकजविक्रम नेम्वाङ र अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । हामी आउनेबित्तिकै कर्माछिरिङ शेर्पाज्यूले हामीलाई थाहै नदिई विधानमै व्यवस्था गर्नुभयो, माइन्युटमा अध्यक्ष र महासचिवले मात्र हस्ताक्षर गर्ने भनेर ।
त्यही कारण पनि यो अवस्था आएको हो । म त्यसो गर्दिनँ । म अधिकार सबै साथीहरूलाई, विभिन्न उपसमितिहरू छन्, तिनलाई अधिकार बाँड्छु । अधिकार पूर्ण जिम्मेवारीसहित बाँड्छु । त्यो भनेको जिम्मेवारी दिन्छु, कर्तव्यबोध गराउँछु, जवाफदेहिता हुनुपर्छ भन्छु । त्यसरी काम गर्छु । म अरूजस्तो सबै अधिकार आफू लिएर काम गर्दिनँ । त्यसले गर्दा पनि सम्पूर्ण टिमलाई म क्रियाशील गराउँछु । कार्यसमितिलाई मात्र होइन, जिल्ला, क्लब, सबैलाई क्रियाशील बनाउँछु ।
वर्तमान अध्यक्षले उहाँले गरेका राम्रा कामको रिस गरेर र उहाँले गरेका काममा अवरोध गर्नलाई तपाईंहरूको उम्मेदवारी हो भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले अहिले भनेजस्तो राम्रो राम्रो काम चाहिँ अहिलेको हाम्रो कार्यसमितिले के गरेछ ? उहाँले एक्लै गरेको जस्तो भन्दै हुनुहुन्छ । कार्यसमितिमा भएको कामको निर्णयमा हामी कार्यसमितिका सबैको हस्ताक्षर छ । त्यो चाहिँ उहाँले एक्लै लिने ? हामीले चाहिँ विरोधमात्र गर्यौं, राम्रो काम गर्न दिएनौं भन्ने आरोप छ । काम चाहिँ के गरेको छ त राम्रो काम ? हिजो हामीले भनेको कुरा कहाँ के गर्यौं । हामीले सातवटा प्रदेशमा महिला/पुरुष गरी १४ वटा टेक्निकल सेन्टर बनाउँछौं भनेको होइन ? हामीले कहाँ बनायौं ।
रौतहटको महिला टेक्निकल सेन्टर बनायौं । त्यो अहिले सञ्चालनमा छ ? त्यो अहिले खण्डहर भइसकेको छ ।
तपाईंहरूले रोक्नुभयो रे नि ?
कसरी हामीले रोक्यौं ? जब कान्तिपुरमा त्यो बनको जग्गा भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि मैले अध्यक्षज्यूलाई ‘यो बनको जग्गा त गाह्रो हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्छ । यो तपाईं हामी मिलेर चाँडो गर्नुपर्छ’ भनें । तर उहाँले मलाई ‘म तपाईंलाई च्यालेन्ज दिन्छु, यो म गर्छु’ भन्नुभयो । अब मलाई च्यालेन्ज दिनुभयो । मलाई किन च्यालेन्ज दिनु उहाँले ? मैले त यो बनको जग्गा हो, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नगरी गर्नु हुँदैन भन्ने मात्र कुरा राखेको हुँ । त्यो त हामीले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । अनि अहिले आएर चाहिँ म यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने कुराको अर्थ छैन ।
यो सबै विरोध गर्यो भन्नु यो एउटा बहानामात्र हो । एन्फाले काम गर्न सक्दा कर्माजीको नेतृत्वमा थुप्रै काम गर्न सकिन्थ्यो । तर उहाँले त देखावटी काममात्र गर्न खोज्नुभयो । ई-बिडिङ भन्छ, हो ल हामीले पहिलो ई-बिडिङ गर्यौं होला । तर ई-बिडिङ गर्ने निर्णय गर्यौं, यो घर बनाउने निर्णय गर्यौं, ई-बिडिङ गर्यौं । तर ई-बिडिङ गरेपछिको प्रक्रिया पनि छ नि त । त्यहाँ आर्थिक समिति छ । त्यहाँ खरिद समिति छ । त्यहाँ निर्माण समिति छ । तिनीहरू बसेर क-कसले बिड गर्यो हेर्नुपर्यो ।
हामीले पोखराको रंगशाला बनाएको, पुनर्निर्माण गरेको होइन, एन्फाको कार्यसमितिले । दशरथ रंगशाला गरेको होइन, विराटनगरको रंगशाला पुनर्निर्माण गरेको होइन । यत्ति हो, दशरथ रंगशालाको चेन्जिङ रुमहरू बनाउँदा एन्फाको २२-२३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पूर्वाधारमा देखिने काम कहाँनिर गरेका छौं हामीले ? एउटा रौतहटको टेक्निकल सेन्टर बनायौं, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं । च्यासलको रंगशालामा सरकारको लगानी छ, अझै हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं । १० वटा नगरपालिकामा हामीले ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने भनेर सम्झौता गर्यौं । हामीले कहाँ सञ्चालन गर्यौं ? तपाईंहरूलाई थाहा छ एन्फाले कहाँ सञ्चालनमा ल्यायौं भनेर ?
५० लाखभन्दा बढीको ठेक्का छ भने ती समितिहरूले सचिवालयमा सिफारिस पठाउनुपर्यो । आर्थिक कार्यविधिमा बकाइदा व्यवस्था छ, ५० लाख र त्योभन्दा बढीको ठेक्का दिँदा निर्णय गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई छ । कसलाई ठेक्का दिने भन्ने अधिकार ती समितिको सिफारिसमा कार्यसमितिलाई छ । तर यहाँ त थाहै हुँदैन । ई-बिडिङ गर्ने भन्यो, गर्यो । ककस्ले ठेक्का हाल्यो, थाहै हुँदैन । कार्यसमितिमा कहिल्यै आउँदैन । अब हामीले ई-बिडिङ गर्यौं भनेरमात्र भएन नि । प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्यो । तर यहाँ त पारदर्शिता छैन । आँधीमात्र प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय गरिन्छ । तर क-कस्ले बिड गर्यो, ती समितिहरूले को-कसलाई सिफारिस गर्यो । त्यसको आधारमा कार्यसमितिले कसलाई ठेक्का दियो भन्ने कुरा कतै छैन । कार्यविधिमा मात्र छ ।
प्रक्रिया पूरा गरेर कहिल्यै भएको छैन । अध्यक्षज्यू अख्तियारले क्लिन चिट दियो मात्र भन्नुहुन्छ । हो अख्तियारले क्लिन चिट दियो । तर अख्तियारले सुझावहरू पनि दिएको छ । नेपालको आर्थिक नियमावली, खरिद ऐन पालना गर्नु भनेर सुझाव दिएको छ । हामीले कहाँ पालना गरेका छौं त ? भन्नुपर्यो नि । कुनै काममा पनि त्यो पालना भएको छैन । अब यो पालना भएन, पालना गर्नुपर्छ भन्नु चाहिँ विरोध हो त ? होइन नि त । पालना गरेको भए संस्थालाई नै राम्रो हुन्थ्यो नि त ।
अहिले उहाँहरूले ‘फिफासँग कति पैसा लिन बाँकी छ । यो १० करोड त केही होइन’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । छ भने दिनुपर्यो नि त । म मान्छु फिफाबाट पैसा आउन बाँकी छ । केही पैसा छ । तर अहिले त एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पनि फिफाले त सबै कागजपत्र क्रोलले पास गर्नुपर्छ । फिफाले पास गर्नुपर्छ । यो अवस्था किन आयो ? पहिले त यस्तो अवस्था आएको थिएन ।
हाम्रो एउटा स्थायी समिति छ, अडिट एन्ड कम्प्लान्स । त्यो समितिले हामी आउनेबित्तिकै संस्थाको कहाँ कहाँ कमजोरी छन् र सुधार गर्नुपर्ने कुरा के के छन्, यसरी सुधार गर्दै जानु भनेर एउटा रिपोर्ट दियो । त्यो रिपोर्टलाई रद्दीको टोकरीमा थन्क्याइयो । रिपोर्टअनुसार हामीले संस्थामा कहा-कहाँ कमजोरी छ, कहाँ-कहाँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने अनुसार गर्दै गएको भए संस्थाको अवस्था अहिले यस्तो हुने थिएन । हामीले फाइनान्स डाइरेक्टरलाई निलम्बित गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । हामीले आर्थिक कारोबारमा कमी कमजोरी गरेको कारण फिफाले क्रोल कम्पनी एन्फामा पठाउँदैनथ्यो ।
अहिले उहाँहरूले ‘फिफासँग कति पैसा लिन बाँकी छ । यो १० करोड त केही होइन’ भन्ने गरेको सुनिन्छ । छ भने दिनुपर्यो नि त । म मान्छु फिफाबाट पैसा आउन बाँकी छ । केही पैसा छ । तर अहिले त एक लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पनि फिफाले त सबै कागजपत्र क्रोलले पास गर्नुपर्छ । फिफाले पास गर्नुपर्छ । यो अवस्था किन आयो ? पहिले त यस्तो अवस्था आएको थिएन । हामी सुशासन गर्छौ, पारदर्शिता गर्छौं भनेर एन्फामा आइसकेपछि आर्थिक पारदर्शिता नै हामीले गर्न नसकेको ज्वलन्त प्रमाण त फिफाले क्रोल कम्पनी पठाउनु हो । अहिले तीन/चार करोड रुपैयाँ एन्फालाई दिने पैसाबाट काटेर फिफाले त्यो कम्पनीलाई दिन्छ ।
हिजो तपाईंहरूले निकै विरोध गरेका पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाकै समर्थनमा तपाईंको उम्मेदवारी हो रे नि त ?
उहाँहरूले मेरो विरोध गर्नुपर्ने कारण केही पाउनुभएन । अनि त्यो आरोप लगाउनुभएको छ । हिजो गणेश थापाजीसँग भएका साथीहरू अहिले मेरो टिममा छन् । तर, त्यो गणेश थापाजीको कारणले होइन । गणेश थापाजी त अहिले प्रतिबन्धित अवस्थामा हुनुहुन्छ । तर उहाँसँग पहिला भएका साथीहरू, देखिएका साथीहरू यता हुनुहुन्छ ।
हिजो कर्माजी पनि उहासँगै हुनुहुन्थ्यो, म पनि उहाँसँगै थिएँ । बीचमा कर्माजी र हामी एकापट्टि भयौं । केही साथीहरू उतातिर हुनुभयो । अहिले ती साथीहरू हुँदाखेरि मलाई त्यस्तो आक्षेप लगाउनु भनेको उहाँले मप्रति केही खोट नदेखेर गर्नुभएको हो । जो जो साथीहरू आउनुभएको छ, उहाँहरू पंकजले फुटबलमा सबैलाई समेटेर राम्रो काम गर्छ, फुटबलको भलोमा काम गर्छ, खेलाडी प्रशिक्षक, रेफ्री, जिल्ला, क्लबहरूको पक्षमा काम गर्छ ।
नेपाली फुटबललाई केही उचाइ दिलाउँछ भन्ने विश्वास लिएर उहाँहरूले टिममा रहेर मलाई साथ दिइरहनुभएको छ । मलाई त अहिले मबाहेक अरू दुई जना अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरू कर्माजी र राजीव पौडेलजीले पनि अन्तिममा आएर मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ । मेरो एजेन्डालाई मन पराएर को-को आउँछन्, त्यसमा म यो फलानाको मान्छे, त्यो तिलानाको मान्छे भनेर विभेद गर्दिनँ ।
मेरो उम्मेदवारी नेपाली फुटबलको विकासका निम्ति हो । सबैभन्दा मुख्य कुरा मसँग एउटा दृढ विश्वास, दृढ इच्छा र दृढ शक्ति के छ भने म इमानदार भएर नेपाली फुटबलको निम्ति काम गरिरहेको छु । भविष्यमा पनि गर्छु । म सबै अधिकारहरू केन्द्रीकृत गरेर काम गर्दिनँ । सबै अधिकारहरू बाँडफाँट गरेर सबैलाई जिम्मेवारी दिएर काम गर्छु ।
अधिकारको बाँडफाँट भयो भने सामूहिक निर्णय हुन्छ । विभिन्न समितिहरू छन्, ती समितिका सुझाव लिएर म काम गर्छु । विधानमै हामीले सबै डिभिजनका लिग गर्ने कुरा कोरेका छौं । म सबै डिभिजनका लिग व्यवस्थित गर्ने, राष्ट्रिय लिग गर्ने, ग्रासरुटलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अझ व्यापक बनाउने हाम्रो योजनामा डटेर काम गर्छु ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले अहिले खेलकुदमा राम्रो बजेट विनियोजन गरेका छन् । ती पैसालाई हामीले बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नुपर्छ । जिल्ला, क्लब र जिल्लाका क्लबहरूमा एकेडेमीहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले हेर्नुहुन्छ भने हाम्रोमा उमेर समूहमा खेलाडी छैनन् भन्दा पनि हुनेछ । धरान र बुटवलका टेक्निकल सेन्टरमा ५५ जना खेलाडी छ । त्यो खेलाडीले हाम्रो जेनेरेसन ग्यापलाई थेग्दैन ।
त्यसैले धेरैभन्दा धेरै एकेडेमीहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसमा महिला र पुरुषका विभिन्न उमेर समूहका एकेडेमीहरू चलाउनुपर्छ । मैले चार वर्षभित्र स्थानीय सरकारहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्ला र क्लबमा गरी कम्तीमा ५० वटा एकेडेमी चलाउने सोच बनाएको छु । यो सम्भव पनि छ ।
हामीले हिजो केही सीमित स्रोत-साधनका बीच एकेडेमी चलाउँदा पनि उमेर समूहमा धेरै राम्रो थियौं । तर अहिले आएर हेर्दा उमेर समूहमा हामी साफमा सबैभन्दा कमजोर मानिएका देशहरूसँग पनि हार्न थालिसक्यौं । हामीसँग उमेर समूहको टिम नै छैन । अब अहिले यु-२० को टिम बनाउन सबै जिल्लामा सेलेक्सन गर्दैछौं । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि हामीसँग योजना हुनुपर्छ । एकपटक हामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छु । यो बजेटले नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिम राम्रो हुँदैन । राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई कसरी बलियो बनाउने र कसरी राम्रो नतिजा ल्याउने भन्ने कुरा हामीले बजेटमै उल्लेख गर्नुपर्छ । बजेट त्यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत थियो ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त इमान्दार हुनुपर्यो । अहिले हाम्रो टिमका साथीहरू इमान्दार छन् । हाम्रो टिमका साथीहरू फुटबललाई माया गर्छन्, मन पराउँछन् । उहाँहरू चाहिँ मन पराउनुमात्र हुन्छ । हामी चाहिँ माया गर्छौं । माया गर्नेले विना स्वार्थ त्यसलाई गोडमेल गर्छ । मन पराउनेले मात्र चाहिँ त्यसलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम पनि बनाउँछ । हाम्रो टिमले त्यस्तो गर्दैन ।
क्लब फुटबलको कुरा गर्नुभयो । ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजनका लिग कस्तो हुन्छ त ?
हाम्रो सोच चाहिँ अहिले भइरहेको ‘ए’ डिभिजनको लिगलाई अलिकति लामो लैजाने भन्ने हो । हामीले राष्ट्रिय लिग गर्ने भन्यौं, तर गरेनौं । मोफसलका चारवटा क्लबहरू अहिले आएर बसेका चार क्लब र ‘ए’ डिभिजनका शीर्ष ६ क्लब लगेर गर्ने भनेका थियौं । त्यो भएको छैन । त्यो हामी सुरु गर्छौं । त्यसैगरी हामी ‘बी’ र ‘सी’ को पनि त्यो गर्ने योजना बनाउँछौं ।
लिगलाई जति लामो गर्यो, जति व्यवस्थित गर्यो त्यो नेपाली फुटबलका लागि राम्रो हुन्छ । यसको लागि पनि अब ‘ए’ डिभिजन क्लब, हाम्रो कार्यसमिति, विज्ञको टिम सबै बसेर कसरी गर्दा नेपाली फुटबलको सबै डिभिजनका लिग राम्रो हुन्छ भन्ने हुन्छ, त्यसैगरी सबैको सल्लाहमा कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं । अहिले लिग चलिरहँदा जति पनि कुरा बाहिर बजारमा आइरहेका छन्, इन्टिग्रिटीले विगतको ‘ए’ डिभिजन लिगमा जुन क्लबलाई कारबाही गरेको छ, त्यस्ता कुरामा हामी शून्य सहनशीलता अपनाउँछौं ।
त्यो कुरा भन्नाले ?
तपाईंलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो । ‘ए’ डिभिजन लिगमा म्याच फिक्सिङ भएर दुईवटा क्लबका एक खेलाडी र एक क्लबका टिम म्यानेजर कारबाहीमा परेको तपाईंहरूलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हो । हिमालयन शेर्पा र सरस्वती क्लबको एउटा खेलमा म्याच फिक्सिङ भयो भनेर इन्टिग्रिटीले करबाही गरेन ? तपाईंले बिर्सिनुभएको त छैन होला ।
अन्तमा, एन्फाको चुनाव महँगो छ भन्ने चर्चा छ नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । चुनाव भन्नेबित्तिकै केही खर्च त हुन्छ । तर महँगो, सस्तो भन्ने हुँदैन । सामान्य खर्च त आउँछ । सामान्य भन्नाले सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्यो । त्यहाँ साथीभाइहरू आउँछन्, सरसल्लाह हुन्छ, योजना बन्छन् । सामान्य चिया, खाजा, खाना खानुपर्यो । त्यो त हुन्छ । सामान्य खर्चमात्र हुने हो । त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । तर अनावश्यक रूपमा निर्वाचन आचारसंहितामा असर गर्नेगरी गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
‘एन्फामा चेन्ज भयो कि भएन मेरो विरोधीभन्दा पनि अरूले मूल्यांकन गर्नुपर्छ’
जापानको सहज जित